48 qof oo ku dhintay shil Tareen oo dhacay waddanka Taiwan
Sawir muujinaya shaqaalaha gurmadka ee goobta gaaray
Ugu yaraan 48 qof ayaa ku geeriyooday boqolaal kalena waa ku dhaawacmeen kaddib shil Tareen oo ka dhacay wadanka Taiwan, sida ay xaqiijiyeen masuuliyiinta dowladda dalkaas.Tareenkan oo ka koobnaa sadeed qeybood oo sii galayay jid dhulka hoostiisa ah ayaa la sheegay inuu ku dhacay gari u soo dhawaaday, taas oo sababtay inuu rogmado.
"Qofba qof ayuu ku dhacay, kulligeen waan is buuranay, cabsi badan ayaan dareemay, qoysas badan ayaa dadkoodii geeriyoodeen" ayay tiri haweeney ka mid aheyd dadkii shilkan ka badbaaday.
Wasiirka gaadiidka Taiwan, Lin Chia-Lung oo gaaray goobta uu shilku ka dhacay ayaa sheegay in tareenkan ay la socdeen 490 qof, wuxuuna sheegay inay ka xunyihiin dhacdadan.
Warbaahinta maxalliga ah ee dalkaas ayaa soo tabisay in dhammaan dadkii ka bad-baaday shilkan laga soo bixiyay meeshii shilku dhacay oo ay dowr saacadood ku go'doonsanaayeen, iyadoo shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa dab damisku ay dhib kala kulmeel.
Shilkan oo ka dhacay magaaladda Hualien, ee woqooyi bari Taiwan waxaa dadka dhintay ku jiray wadihii Tareenka, waxayna u badnaayee dalxiiseyaal iyo dad kale oo u baxay fasax dhaqameedka todobaadka soconaya ee dalkaas.
Booliska ayaa xiray darawalka baabuurka looga shakisanyahay inuu sababay shilkan.